नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्दैं « हाम्रो ईकोनोमी
नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्दैं
सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक आज दिउँसो ४ वजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाईएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ९ भदौंमा अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसेयता बस्न सकेको थिएन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वदेश फर्केपछि सचिवालय बैठकको तयारी भएको हो ।
पार्टीका दुई अध्यक्षको लगातारका भेट र छलफलपछि आज सचिवालय बैठक बोलाएको हो । ९ भदौंमा ओली नहुँदा पनि प्रचण्डको अध्यक्षतमा पहिलो पटक नेकपा सचविालय बैठक बसेको थियो ।
ओलीले सिंगापुर भ्रमणमा जानु अगाडी ५ भदौंमा आफु नहुदा पनि सचिवालय बैठक बोलाउन र आवश्यक निर्णय लिनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिएका थिए । नेकपाभित्र पार्टी जिम्मा प्रचण्ड र सरकारको जिम्मा ओलीले लिने गरी कार्यविभाजन गर्न दबाब परिरहेका बेला अव ओलीले एकल कार्यकारी जिम्मा प्रचण्डलाई दिन्छन् ? दिदैनन् भन्ने नेकपाभित्र अहिले प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
५ भदौंमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओली नेपाल चर्काचर्की समेत परेको थियो । त्यो दिन देखि यी दुई नेताका बीचमा औपचारिक भेटघाट र कुराकानी समेत पनि भएको छैन ।
रोकिएको पार्टी संगठनात्मक एकताका विषयमा निर्णय लिनका लागि बिहिबार सचिवालय बैठक बस्न लागेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताए ।
नेकपाभित्र केन्द्रीय निकायका रुपमा लेखा, अनुशासन, निर्वाचन आयोग गठनका विषयमा निर्णय लिन बाँकी छ । महानगर कमिटि, प्रवास कमिटिहरुको एकताका काम पनि बाँकी छ । केन्द्रले टुंग्याउनु पर्ने राष्टिय प्रतिनिधी परिषद्को गठन गर्न बाँकी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लोभलाग्दो जागिर, राम्रो तलब–सुविधा, सामाजिक प्रतिष्ठा। अरुले प्रशंसा गरे
अग्नि सापकोटामाथि कुनै मुद्दा छैन: प्रचण्ड
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी
प्रचण्डले भने : पार्टीले सरकारलाई नेतृत्व गर्ने हो
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले पार्टी
श्रृंखलालाई भुतुक्कै पार्ने ‘दले दाइ’, हेर्नुहोस् भिडीयो
सामाजिक सञ्जालको जमाना छ । यदि तपाईंसँग कुनै विशिष्ट प्रतिभा छ भने
क्षेत्री,बाहुनको कोखबाट जन्मनु अपराध हो ? जातिय आरक्षण
धादिङका रमेश धमला सहित पाँच जिल्ला सभापतिलाई निलम्बन
महरा फसाउने यस्तो थियो अमेरिककाको खतरनाक योजना, देव
अस्ट्रेलिया काण्ड भन्दै ‘निलो भिडियो’ले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल